Kachin State – Page2– democracy for burma
Muslim rape teenage burmese girl Myitkyina မြစ်ကြီးနားမြို့တွင် အသက်(၁၄)နှစ်အရွယ် မစုစုအား မွတ်စလင်တစ်ဦးမှ မုဒိန်းမှုကျူးလွန်-video
On November 11, 2013 November 11, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
source U KAWLAY
Interview victim Burmese girl raped by muslim in Myitkyina City
Fourteen years old teenager Burmese girl Ma Su Su was raped,tortured and threatened by Muslim over thirty years old motor cycle taxi driver in her home Myitkyina City , Kachin State , Myanmar( Burma)
မြစ်ကြီးနားမြို့တွင် အသက်(၁၄)နှစ်အရွယ် မစုစုအား မွတ်စလင်တစ်ဦးမှ မုဒိန်းမှုကျူးလွန်
၂၀၁၃ ၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၀ ရက်
မြစ်ကြီးနားမြို့၊ မြို့သစ်ကြီးအုပ်စု၊ ဂျာမိုင်ကောင်းရပ်ကွက်၊ နယ်မြေ (၁၃) ၊ အိမ်အမှတ် (ခ/၆၈၁) နေ အဖ- ဦးတင်ဝင်း၏ သ္မီး အသက်(၁၄)နှစ်ရွယ် မစုစုသည် (၂၃.၁၀.၂၀၁၃) ရက်နေ့ နံနက် (၇)နာရီအချိန်တွင် ဈေးဝယ်ပြီး နေအိမ်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိစဉ် နေအိမ်ရှေ့မှ ခေါ်သံကြား၍ သွားရောက်ရာ နေအိမ်သို့ ယာဉ်မောင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူ ဦးထိန်လင်းအား ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီ လိုက်လံပို့ဆောင်ပေးနေကြဖြစ်သူ တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း သိရသဖြင့် မစုစုမှ ဦး ဘာကိစ္စရှိလို့လဲဟု မေးမြန်းရာ သော့ပျောက်လို့ လာရှာတာဟု ပြောသဖြင့် တံခါးဖွင့်ပေးခဲ့ကြောင်း၊ တံခါးဖွင့်ပေးပြီး မစုစုသည် နေအိမ်မီးဖိုချောင်၌ ဟင်းချက်ရန် ပြင်ဆင်နေစဉ်
မြစ်ကြီးနားမြို့၊ အေးစေတီရပ်ကွက်နေ အသက်(၃၀)ခန့်အရွယ်၊ တင်မျိုးလတ်(ခ)မျိုးမင်း မှ မစုစုအား လက်အတင်းဆွဲ၍ နေအိမ်အိပ်ခန်းအတွင်းသို့ ခေါ်ဆောင်၍ ကုတင်ပေါ်တင်ကာ မစုစု၏ ပါးအားနမ်းခြင်း၊ ဘောင်းဘီချွတ်၍ လည်းပင်းအား ကတ်ကြေားဖြင့် ထောက်၍ ကာမရယူရန် ကြိုးစားခြင်းတို့ကြောင့် မစုစုမှ အော်ဟစ်အကူအညီတောင်းခံသော်လည်း တစ်ဦးတစ်ယောက်မှ ရောက်မလာသဖြင့် အခိုက်အတန့်ကြာအောင် ရုန်းကန်ပြီး တင်မျိုးလတ်(ခ) မျိုးမင်းထံမှ ထွက်ပြေးခဲ့ရာ အိမ်ဝင်းတံခါးအနီး အရောက်၌ ပတ်ဝန်းကျင်လူများမှ ဘာဖြစ်တာလဲ ဟုမေးမြန်းရာ တင်မျိုးလတ်(ခ) မျိုးမင်းဆိုသူမှ “ဘာမှမဟုတ်ဘူး ကောင်မလေးက မုတ်ဆိပ်နဲ့မို့ ကြောက်လို့အော်တာဆိုပြီး ဆိုင်ကယ်စီး၍ ထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ Continue reading “Muslim rape teenage burmese girl Myitkyina မြစ်ကြီးနားမြို့တွင် အသက်(၁၄)နှစ်အရွယ် မစုစုအား မွတ်စလင်တစ်ဦးမှ မုဒိန်းမှုကျူးလွန်-video” →
ETHNIC ARMED ORGANIZATIONS CONFERENCE LAIZA-လိုင်ဇာတွင်ကျင်းပသောတိုင်းရင်းသားညီလာခံ
On October 29, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
လိုင်ဇာတွင်ကျင်းပသောတိုင်းရင်းသားညီလာခံ( ETHNIC ARMED ORGANIZATIONS CONFERENCE LAIZA)သို့တက်ရောက်လာကြသော တိုင်းရင်းသား တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်များ (၂၉.၁၀.၂၀၁၃)ရက်နေ့ နေ့လည် (၁၂း၀၀)နာရီအချိန်တွင် မြစ်ကြီးနားမှ တဆင့် လိုင်ဇာမြို့သို့ရောက်ရှိလာကြကြောင်းသိရှိရပါသည်။ ယခု လက်ရှိ လိုင်ဇာသို့ ရောက်ရှိ နေ ပြီဖြစ်သော တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေး အဖွဲ့များမှာ
KNPP, NMSP, ALP, ANC, LDU, WNO, ARAKAN ARMY, PSLF/T.N.L.A, CNF, SSPP/SSA, DKBA, (DKBA.KLLT.Kayan Pyitit), KNU, NMSP, KNPP, PNLO, RCSS/SSA စသည့် အဖွဲ့ များဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ လိုင်ဇာသို့ ရောက်ရှိလာကြသော တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များအား KIO, ဗဟိုကောမတီဝင်များ တာဝန်ရှိသူများ နှင့် ဒေသခံ လိုင်ဇာလူထုမှ သောင်းသောင်းဖြဖြ ကြိုဆိုကြကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်။
Myanmar:မုန်းဒိန်ပါ ရွာသား ၇၀၀ ကျော်ကို အစိုးရတပ်မှ ဘုရားကျောင်းသို့ အဓမ္မ ထိမ်းသိမ်းထား Fighting Resumes in Southern Kachin State
On October 24, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
မုန်းဒိန်ပါ ရွာသား ၇၀၀ ကျော်ကို အစိုးရတပ်မှ ဘုရားကျောင်းသို့ အဓမ္မ ထိမ်းသိမ်းထား
23 October 2013 by KNG News
စစ်အင်အား ၂၀၀ ကျော်ရှိသော အစိုးရတပ်သည် ကောင်ဂျာမှ လက်နက်ကြီး လက်နက်ငယ်များဖြင့် ပစ်ခတ်လာကာ မုန်းဒိန်ပါ ရွာသို့ဝင်ရောက်ပြီး ရွာသားများအားခြိမ်းခြောက်ပစ်ခတ်ကာ ဘုရားကျောင်းဝင်းသို့ထိမ်းသိမ်းလိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း မုန်းဒိန်ပါမှ ဆရာဇယ်ထောင်း (Sara Ze Htawng) KNG ကချင်သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
ဆက်လက်ပြီး ယနေ့ နံနက်ထိ အစိုးရတပ်များလှုပ်ရှားလာခြင်းကြောင့် KIA တပ်ရင်း (၁၂) နယ်မြေ (ရှမ်းပြည်နယ်ဘက်ခြမ်း) မဘိန်းမြို့နယ် ရွှေလီမြစ်အနောက်ဘက်မှ ဆဂနမ်ခွမ် (Saga Nam Hkum) တွင် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွာခဲ့ကြောင်း တပ်မဟာ (၃) KIA ရှေ့တန်းစခန်းမှ ပြောသည်။
မုန်းဒိန်ပါကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ ၆၀၀ ခန့်ရှိပြီး လူဦးရေ ၂၀၀၀ ကျော်ရှိရာ အချို့ကျေးရွာသားများသည် နက်လက်ကြီးများရွာသို့ ပစ်ခတ်လာချိန် မိမိလုံခြုံရာလယ်ယာများ နေရာဒေသအသီးသီးသို့ ထွက်ပြေးသွားကြောင်းသိရသည်။
“စားသောက်ဖို့က သိပ်စိုးရိမ်စရာမရှိဘူး လယ်တွေယာတွေရှိတဲ့နေရာဖြစ်တယ် အခုရှိနေတဲ့အစိုးရတပ်က ရွာသားတွေကို ဘယ်လိုထိန်းချုပ်ထားလဲဆိုတာကို စိုးရိမ်တယ် ဆွေးနွေးပွဲမှာ စစ်ရှိန်လျှော့ချရေးနဲ့ တိုက်ပွဲတွေ ထပ်မံမဖြစ်ပွားရန် သဘောတူထားတယ် ဒါမဲ့ သူတို့ဘက်က လှုပ်ရှားလာပြီး တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်လာတော့ KIO ကို လက်မှတ်မထိုးတဲ့အတွက်ကြောင့် ပစ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ သဘောနဲ့ ပစ်နေတယ်လို့ မြင်တယ်” ဟု KIO ဒုက္ခသည်ကယ်ဆယ်ရေး ကော်မတီဥက္ကဌ ဆလန်ကဘာဒွဲပီဆာ KNG ကချင်သတင်းဌာနသို့ ကသုံးသပ်သည်။
မြစ်ကြီးနားမြို့ ဆွေးနွေးပွဲတွင် စစ်ရှိန်လျှော့ချရေးနှင့် တိုက်ပွဲများ ထပ်မံမဖြစ်ပွား စေရေးအတွက် ပူးတွဲ စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီ (Joint Monitoring Committee) အား ပဋ္ဋိပက္ခဖြစ်ပွား ရာဒေသ အားလုံး အကျုံးဝင်စေမည့် ဖွဲ့စည်းပုံဖြင့် ဖွဲ့စည်းသွား ရန်သဘောတူခဲ့ခြင်းဖြစ်သော်လည်း အစိုးရတပ်ဖက်မှ စစ်အင်အားတိုးချလှုပ်ရှားမှုများကြောင့် တိုက်ပွဲ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေခြင်းဖြစ်သည်။
October 23, 2013 by Kachin Land news
After several rounds of mortar shelling that also targeted an IDP camp andaboarding school in Mung Ding Pa village, Burmese army troops entered the village on Oct 22. Mung Ding Pa village, located in Mansi township in southern Kachin State, isavillage of about 1000 villagers that include over 300 students in an IDP boarding school.
About 400 villagers who could not flee to safer areas are currently being held inalocal church by government soldiers. A villager who had fled from Mung Ding Pa said, “Burmese soldiers occupy our houses in three blocks. The whole village is filled with Burmese soldiers. Many soldiers have just moved to Mahkaw Yang block.” He continued, “they ransacked our homes and took our belongings as they like.” Continue reading “Myanmar:မုန်းဒိန်ပါ ရွာသား ၇၀၀ ကျော်ကို အစိုးရတပ်မှ ဘုရားကျောင်းသို့ အဓမ္မ ထိမ်းသိမ်းထား Fighting Resumes in Southern Kachin State” →
ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီနှင့် KIO ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့၏ သဘောတူညီချက်• Agreement Government and KIO
On October 10, 2013 October 10, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
KIO ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့၏ သဘောတူညီချက်•
• အချက်(၇)ချက်ပါ သဘောတူညီချက်အား ၁၀-၁၀-၂၀၁၃ ရက်နေ့တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့သည် •
Click to access KIO_GOVERNMENT_AGREEMENT.pdf
Joint Technical meeting between UPWC-TT and KIO-TT at KIO Technical Advisory Team Office earlier this morning
MYANMAR: KIO Delegation arrived in Myitkyina_ကေအိုင်အို ခေါင်းဆောင်များအား လှိုက်လှဲနွေးထွေးစွာ ကြိုဆို
On October 7, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
For another roundup of talks with the govt negotiators , the delegation of Kachin Independence Organization arrived in Kachin State’s capital, Myitkyina on Monday with crowds welcoming.
မြစ်ကြီးနား သို့ ရောက်ရှိလာသော ကေအိုင်အို အစိုးရ ခေါင်းဆောင်များ နှင့် အဖွဲ့ ဝင် များအား မြစ်ကြီးနား ဒေသခံများ မှ လှိုက်လှဲနွေးထွေးစွာ အင်တိုက်အားတိုက် ကြိုဆို